माघ १ गतेदेखि रंगमञ्चको ढोका खुल्ने :: जुना श्रेष्ठ :: Setopati
माघ १ गतेदेखि रंगमञ्चको ढोका खुल्ने
रंगमञ्च कहिलेबाट खुल्छ?
यो प्रश्न लामो समयदेखि झेलिरहेका रंगकर्मीहरूसँग अब उत्तर छ - माघ १ गते।
कोरोनाका कारण लामो समयदेखि अन्धकार छाएको नाटकघरमा उज्यालो छिर्ने तयारी भइरहेको छ। थिएटर हबका संयोजक देव न्यौपानेका अनुसार चालू अवस्थामा रहेका नौ नाटकघर क्रमबद्ध रूपमा खोल्ने तयारी भइरहेको छ।
थिएटर हबले देशभरका नाटकघरलाई एकै थलोमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ। हबका अनुसार हरेक क्षेत्रमा प्रतिबन्ध हटिसक्दा पनि नाटकघर अझै नखोल्नुमा कुनै ठोस कारण छैन। त्यसैले नाटकघरसँगको सहमतिमा यहाँको ढोका खुल्न लागिएको हो। रंगमञ्चहरू आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै खुल्न लागेका हुन्।
कोरोना महामारी र लकडाउनले अन्य क्षेत्रमा झैं रंगमञ्चमा ठूलो आर्थिक एवम् सामाजिक असर पुर्‍यायो। देवका अनुसार केही रंगकर्मीहरू मानसिक तनावबाट समेत गुज्रिए।
'केही रंगकर्मी साथीमा डिप्रेसन पनि देखियो। यतिसम्म कि यहाँ बस‍ेर जीविका गुजार्न गाह्रो हुन्छ भन्ने सो‍चले केही साथी पलायन हुनुभएको खबर पनि छ,' उनले भने।
नाटकघर र रंगकर्मीको समस्या सम्बोधन गर्ने र एकमुष्ठ रूपमा दर्शकमाझ पुर्‍याउने काम थिएटर हबले गर्दै आएको छ। यसले नेपाली नाटकघरका गतिविधिबारे समग्रमा जानकारी गराउदै रंगमञ्च प्रेमीसँग नजिकको सम्बन्ध विकास गर्दैछ।
नाटकघर पुनः सुरू गर्ने विषयमा हबले झन्डै ४ महिनाअघिबाट छलफल गरिरहेको देव बताउँछन्।
'रंगकर्मीले समाजको लागि काम गर्ने हो। तर यसपटक समाज मात्र भनेर बस्ने स्थिति छैन। अझै नाटकघर नखुले कहिले खोल्ने? दैनिक मञ्चनमा गुजारा चलाएका सहकर्मीको समस्या अझै कति व्यवास्था गर्ने?,' उनी प्रश्न गर्छन्।
उत्तर खोज्दै जानेक्रममा सबैको सहमतिमा माघ १ को मिति तोकिएको हो। यसमा काठमाडौंका मात्र नभई मोफसलका नाटकघरको पनि समर्थन मिल्यो।
'अहिले नाटकघर खुल्यो भन्ने सन्देश मात्र दियौं भने अबको डेढ महिनामा नाटक मञ्चन पनि हुनसक्ने विश्वास राखेका छौं,' उनले भने, 'नाटकघरसम्म दर्शक तान्न सुरूमा नाटकघर खुल्ने जानकारी दिन जरूरी रहेकै कारण यसो गरेका हौ।'
डेढ महिनादेखि तीन महिना अवधिमा त एउटा राम्रो नाटक तयार गर्नै लाग्छ। त्यसैले नयाँ नाटक मञ्चनको लागि रंगकर्मीहरूसँग समय र लगत्तै नाटक मञ्चन हुने खबरमा दर्शक नाटकघर पुग्ने दिघो सोचाइसँगै नाटकघर खुल्न लागेका हुन्।
प्रत्येक दिन छुट्टाछुट्टै विषयमा प्रस्तुति, छलफल लगायत कार्यक्रम गर्दै नाटकघर खुल्नेछन्। हालसम्मको तालिकाअनुसार माघ १ गते शिल्पी खुल्दैछ। हुन त गत आइतबार झन्डै १० महिनापछि शिल्पी नाटकघरको ढोका खुलिसक्यो। त्यो दिन शिल्पीले '६ पात्रको एकालाप' नाटक मञ्चन गर्‍यो।
'माघ १ गतेका लागि पनि हामी तयार छौं,' शिल्पीका घिमिरे युवराजले भने, 'केही सीमित दर्शक रंगमञ्चलाई मिस गरिरहेका छन् र उनीहरू नाटक हेर्न आतुर छन्।'
शिल्पीपछि विराटनगरस्थित झोराहट थिएटर, आरोहण गुरूकुल, पोखरास्थित पोखरा थिएटर, काठमाडौंको मण्डला थिएटर, थिएटर मल, कौशी र शैली थिएटर पनि खुल्नेछन्। कुन दिनमा कुन नाटकघर खोल्ने भन्ने पूरा तालिका भने अहिलेसम्म तयार भएको छैन।
हालसम्म भने शिल्पी नाटकघरबाट सुरू भएर नवौं दिन थिएटर मल खुल्ने तालिका बनेको थिएटर मलका अध्यक्ष केदार श्रेष्ठले बताए।
'माघ १ गते शिल्पीमा नाटक देखाइँदैछ। शैली र मण्डलामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र कौशीमा प्लेब्याक सो गर्ने भन्ने छ। माघ ९ गते थिएटर मलमा हामी पोयट्री पटरी गर्दैछौं,' केदारले भने, 'तर तालिकामा फेरबदल हुनसक्छ।'
रंगकर्मीसमेत रहेका केदारका अनुसार यसरी क्रमबद्ध हिसाबले थिएटर खोलेर दर्शक र सरकारलाई 'नाटकघरको ढोका खोलौं' भन्ने सन्देश दिन खोजेका हुन्। यसले नाटकघरहरूको एकताको सन्देशसमेत बोकेको उनी बताउँछन्।
'हामी एकल रूपमा अघि सर्‍यौं भने नाटकघरका दर्शकसम्म पुग्न सक्दैनौं। न त सरकारले नै सुन्नेवाला छ। त्यसैले, एकजुट भएर यो योजनासहित अगाडि आएका हौं,' केदारले भने।
झन्डै ७ वर्षअघि सुरू भएको थिएटर मलले कोरोना महामारी समय विभिन्न क्रियाकलापसँगै नाटकघरलाई जीवित राख्न कोशिस गर्‍यो। उनीहरूले लकडाउनमा विश्व रंगमञ्च दिवसको अवसर पारेर भर्चुअल रूपमा ‘क्वारेन्टाइन अभियान नाट्य उत्सव–२०७६’ गरे। त्यसमा थिएटर सेन्टर फर चिल्ड्रेन (टिसिसी नेपाल) ले साथ दियो।
तर अहिले अवस्था यस्तो छैन। यातायात, क्लब, रेष्टुरेन्ट र फिल्म हल समेत खुलिसक्दा नाटकघर अझै बन्द राख्न कुनै बलियो आधार छैन।
पोखरास्थित पोखरा थिएटरले नाटकघर खोल्ने दिन फागुन-चैतमा महोत्सव आयोजना गर्ने योजनाअनुरूप महोत्सव र प्रतियोगिताका लागि आवेदन खोल्ने भएको छ। यसका अध्यक्ष परिवर्तन कार्कीका अनुसार त्यो दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यालय नाटक महोत्सवका लागि भर्चुअल आवदेन खोल्ने भएका हुन्। हालसम्मको तालिकाअनुसार पोखरा थिएटर माघ ६ गते खोल्ने भनिएको छ।
'लकडाउनमा पनि हामी भर्चुअल माध्यमबाट थिएटर हब र अन्य नाटकघरसँग सम्पर्कमा रह्यौं। नाटकघर कहिले खोल्ने भन्ने छलफल भइरह्यो। यसपालि खोल्ने निष्कर्षमा पुग्यौं,' नाटकघर नखुल्दाको दुखेसो पोख्दै भने, 'कति रंगकर्मीले पेसा परिवर्तन गर्नुभयो। अझै पनि हामी हाम्रो टोली र नाटकघर यसै थन्केर बस्न दिन सक्दैनौं।'
करिब २ वर्षअघि सुरू भएको पोखरा थिएटरमा अहिले करिब ३० जना रंगकर्मी सक्रिय छन्। भर्खरै बामे सर्दै गरेको रंगमञ्चलाई पुरानै ठाउँमा थचार्‍यो।
'फरक यति हो, दुई वर्षअघि हामीसँग संरचना थिएन। अहिले छ,' अध्यक्ष परिवर्तनले भने। पोखरा नाटकघरले अनौपचारिक रूपमा भौतिक नाटक कक्षा भने पुस २० गतेदेखि सुरू गरेको उनले जानकारी गराए।
'नाटकघरको ढोका खौलौं' नाराको साथ नाटकघर खुल्ने तयारीमा भए पनि दर्शक कति तयार छन्, त्यो समयले बताउने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २६, २०७७, ०३:४८:००